ဘဝမှတ်တိုင်: August 2016
♪ Pokémon GO ကို ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကစားနည်းလမ်းညွှန်လေး ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ် ♫
ပထမဆုံးဆော့ကစားတဲ့သူတွေအတွက် အနားမှာ Starter Pokemon အနေနဲ. Charmander , Squirtle နဲ. Bulbasaur သုံးကောင်ကိုအသင့်ဖမ်းဖို့ ချပေးမှာပါ
ထိုသုံးကောင်ထဲက တကောင်ကိုဖမ်းပြီးရင် ကျန်တဲ့နှစ်ကောင်ကအလိုလိုပျောက်သွားမှာပါ
အကယ်လို့ သင်ဟာ ထိုသုံးကောင်လုံးကိုမရွေးပဲထိုနေရာကနေ အဝေးကိုသွားပါ
ထိုအခါ ထိုသုံးကောင်က အဲဒီနားကနေပျောက်ပြီးသင့်နေရာနားမှာပြန်ပေါ်လာပါမယ်
အဲဒီလိုမျို3းကြိမ်4ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ အဲဒါဆိုရင်(ကံကောင်းရင်) သင့်အနားမှာ Pokemon Series ရဲ့ချစ်စရာ Mascot ကောင်လေး Pikachu ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
အကောင်ဖမ်းရတာ လွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့အချို့ကောင်တွေက ပြန်တိုက်ခိုက်တတ်ပါတယ်
သူတို့ပြီးတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးမှ PokeBall ကိုပစ်ပါ မဟုတ်ရင် ဘောလုံးဆုံးပါတယ်
ပုံမှန်တွေ့နေကျကောင်တွေကလွဲရင် အချို့ရှားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ကောင်တွေက ဘောလုံးထဲကပြန်ရုန်းထွက်နိုင်ပါတယ်။ “Gotcha” လို့မပေါ်မချင်းသင်မရသေးပါဘူး
ရှားပါးကောင်တွေကျတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်းသင် မဖမ်းနိုင်ပါက သင့်ရှေ့ကလုံးဝထွက်ပြေးသွားမှာပါ
အဲဒါတွေကတော့ အပြင်က ဘုရားကျောင်းတို့ ၊ နာမည်ကြီးအဆောက်အအုံတွေဖြစ်ပါတယ်
ထိုနေရာကိုသွားပြီး Trainer တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ အလကားရပါတယ်
အဆိုပါ Pokestop တွေက5မိနစ် သို. 10 မိနစ်ခန့်အကြာမှာ နောက်တခါပြန်ယူခွင့်ရှိပါတယ်
သင်က Level5ရောက်ပါက Gym Battle တွေကိုစ၀င်လို့ရပါပြီ
မ၀င်ခင်မှာ Instinct (အ၀ါ) ၊ Mystic (အပြာ) နဲ့ Valor (အနီ) ဆိုပြီးအဖွဲ့သုံးခုထဲကတခုဝင်ရမှာပါ
၀င်ပြီးရင် Gym တွေလိုက်သိမ်းလို့ရပါပြီ
GYM က Gym lvl အပေါ် မူတည်ပါတယ်
Gym ပေါ်မူတည်ပြီး ဥပမာ GYM lvl2ဆိုရင် ကိုယ့် pokemon ရယ် allies pokemon ရယ် ၂ ကောင်ဘဲ ထည့်လို့ရပါတယ်
GYM lvl6ဆို ကိုယ့် Pokemon၁ ကောင်ရယ် allies ၅ ကောင်ရယ် ထည့်လို့ရပါတယ်
ကိုယ် ထည့်ထားတဲ့ pokemon အပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ရက်ကို poke coin နဲ့ star dust ရနိုင်ပါသေးတယ်
GYM lvl တက်ဖို့က အရင်ဆုံး GYM ကို ရအောင် လုပ်ပါ
မိမိရဲ့ pokemon ကို ထားပါ
မိမိရဲ့ တစ်ခြား pokemon နဲ့ train ဆိုတာကို လုပ်ပြီး attack ပါ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ GYM lvl တက်လာပါလိမ့်မယ်
သင်တခါတလေ Pokestop တွေရောက်ရင်း သို့မဟုတ် Level တက်ရင်းနဲ. ဥတွေရတတ်ပါတယ်
အဆိုပါ ဥတွေကို Egg Incubator ထဲထည့်ပြီး အကောင်ပေါက်ဖို.အတွက် လမ်းလျှောက်ပေးရပါတယ်
Egg Incubator ကတော့ Trainer တယောက်ကို 1 ခုပါရှိပြီးတော့ တပြိုင်ထဲ အများကြီးဖောက်ချင်ရင်တော့ 1 ခါဝယ်ရင်3ခါအထိလုပ်လို.ရတဲ့ Incubator ကိုဝယ်ရမှာပါ
(သင်ရရင်ရသလို အကောင်ဖောက်ဖို့ ဥကိုထည့်ထားပါ)
တခါတလေမှာ မြေပုံအတွင်းမှာ သစ်ရွက်များ လှုပ်နေသလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
အဲဒီနေရာတွေမှာတော့ Pokemon ကောင်းတာလေးတွေရှိဖို့ အခွင့်အရေးများပါတယ်
PokeStop တွေမှာ Lure Module တွေသုံးပြီးတော့ နာရီဝက်ခန့် Pokemon တွေအနားလာအောင် ဆွဲဆောင်လို.ရပါတယ်
အဆိုပါ Module သုံးထားပါက Stop ကပန်းလေးများဝေနေသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်
ထိုနားတ၀ိုက်က Trainer တွေအကုန်လုံး လာတဲ့အကောင်ကိုဝိုင်းဖမ်းလို့ရတယ်
Incense ဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ သဘောချင်းဆင်ပါတယ်
Incense ကတော့ တဦးထဲကသာဖမ်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်
တူတယ်ဆိုရင်တောင်မှ CP (Combat Power) များတဲ့အကောင်ပဲထားပြီး ကျန်အကောင်တွေကို Transfer လုပ်ပြီး Candy နဲ့လဲပါ
လဲလိုက်တဲ့ပိုကီမွန်ရဲ့ Candy ကိုပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်
မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကောင်ရပြီဆိုပါက ထိုအကောင်ကို Evolve လုပ်ပေးပါ
မဟုတ်ရင် Power တင်ပါ
ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက အထက်ဖော်ပြပါ Pokemon များအတွက်သက်ဆိုင်ရာ Candy လိုအပ်ပါတယ်
Gym Battle တွေမှာ Pokemon တွေရဲ. Elemental Type တွေကလည်း CP တွေထက်ပိုပြီးတော့တောင်အရေးပါတယ်ပြောရမှာပါ
တဖက်ရန်သူရဲ့ Element ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က Counter ဖြစ်လောက်မဲ့ Pokemon တွေနဲ.သွားချရင်နိုင်မှာပါ
ဥပမာ လျှပ်စစ်ကောင်ကို ရေကောင်နဲ့သွားချရင် ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်
တကယ့်အကောင်ဖမ်းသလိုအရသာလိုချင်ရင်တော့ AVR mode ဖွင့်ပြီး Camera နဲ့ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် Camera နဲ့ဆော့ရတာအဆင်မပြေရင်တော့ AVR ကိုပိတ်ထားရုံပါပဲ
Phone နဲ့ဆော့မဲ့ Trainer တွေအတွက်ကတော့ Battery Saver Mode တွေဖွင့်ထားဖို့လိုပြီးတော့အကောင်ပေါ်တာတို့ Stop ရောက်တာတို.ကိုသိစေဖို့ noti လေးဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်
တတ်နိုင်သူများကတော့ အိပ်ဆောင် Battery လေးတွေဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်
Pokemon GO ဂိမ်းက 1 နာရီလောက်ဆော့ရင်အနည်းဆုံး Data Usage အနေနဲ့ Operator အပေါ်မူတည်ပြီးတော့4MB ကနေ 8 MB လောက်ကြားမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်
Level တင်လိုသူတွေအတွက်ကတော့ Pokemon တွေရသလောက်ဖမ်း Pokestop တွေတတ်နိုင်သလောက် ပတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်
မိမိမှာမရှိသေးတဲ့ အကောင်သစ်ဖမ်းနိုင်ရင် 500 XP လောက်ရမှာပါ
တစ်ကီလိုမီတာ လျှောက်ရင် 100 XP ရမှာဖြစ်ပြီး အကောင်ပေါက်ခဲ့ရင်လဲ XP ကိုထပ်လောင်း ရအုံးမှာပါ
မိမိဖမ်းမိတဲ့အကောင်မှန်သမျှကို Pokedex မှာကြည့်လို.ရပါတယ်
ကိုယ်ဆော့တဲ့ Pokemon GO အကောင့်ပျက်သွားရင် အရမ်းနှမျောဖို့ကောင်းပါတယ်
ဒါကြောင့် Ban တာကိုမခံရအောင် အကောင့်တခုထဲကိုပွားမဆော့ဖို့နဲ့ Fake GPS ကိုမသုံးဖို့ပြောပါရစေ
အကောင့်ကို ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Gmail နဲ့လုပ်ထားတာပိုစိတ်ချရပါတယ်
လမ်းသွားစဉ် သတိနဲ.သွားပါ (ကားတိုက်ခံရတာတို. မြောင်းထဲပြုတ်ကျတာတို. ဈေးဘန်းတက်နင်းမိတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
ကစားသမားအချင်းချင်း ခင်ခင်မင်မင် နဲ. ကူညီကြပါ (Team မတူလို့ဘာညာမလုပ်ပါနဲ့)
ဖြစ်နိုင်ရင် ညဘက်ထွက်ပြီး မဆော့ပါနဲ့ ဆော့မယ်ဆိုလည်း ၀ါသနာတူ ဘော်ဒါတွေနဲ့ဆော့ပါ(လုယက်တာတွေမခံရအောင်ပါ)
ကားမောင်းရင်းမဆော့ပါနဲ့ ဆော့မယ်ဆိုလည်း ဘေးကသူငယ်ချင်းကိုဆော့ခိုင်းပါ
ကဲ့အားလုံးအတွက်သတိချက်စရာများ တင်ပြီးပြီဆိုတော့ ကဲ သူငယ်ချင်းတသိုက်နဲ. ဒါမှမဟုတ် တယောက်ထဲ စွန့်စားခန်းတွေစတင်လိုက်ရအောင်
Credit to AKZ (Myotaku.club)
Pokémon GO မဆော့ခင် ဒီလင့်ကိုအရင်ဝင်ကြည့်ပါ
ဒီလိုမဖြစ်စေပါနဲ့ ==> https://www.facebook.com/itknowledgesharer/videos/1747058335544219/
Game Update Download Links
For Android: https://m.apkpure.com/pokemon-go/com.nianticlabs.pokemongo
For iOS: https://appsto.re/us/XnIpbb.i
credit to AKZ(Myotaku.club)
တပ်ကုန်းသား(IT Knowledge Sharer)
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/15/2016 07:15:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/14/2016 10:34:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/12/2016 07:28:00 pm0comments